Ithuluzi le-Multifunctional ku-umhlahlandlela omkhulu Okukhethekile komnyango wethu wokuhlela
Qala Wena ithuluzi Ithuluzi multifunction
Das Ithuluzi multifunction ukuthuthukiswa ekhaya.
Imisebenzi emkhakheni wokuthuthukisa ikhaya, njengokubona, ukugaya nokupholisa, idinga njalo amakhono namathuluzi ahlukene. Ukuze uqiniseke ukuthi awudingi amathuluzi amaningi kakhulu emisebenzini emincane, abathengisi abaningi manje bakhiqiza amathuluzi amaningi okusebenza, angenza lezi zenzo ezenziwe ngesandla ngesandla ngosizo lwezinhlobonhlobo ezahlukene.
1 Iyini ithuluzi lezinhlelo eziningi
2 Izinhlobo zamathuluzi amaningi
2.1 I-Multitools enezintambo
2.2 Amathuluzi amaningi angasebenzisa i-Cordless
3 I-criteria yokuthenga yama-multitools
10 Imikhiqizo ehamba phambili
12 amagilavu ​​zokuzivikela
13 Ukuvikela amehlo
14 Ukuvikelwa zokuphefumula
15 Ukuvikelwa kokuzwa
16 ukuphepha nangesigqoko
17 Imiyalo eqhubekayo yokuphepha
Iyini ithuluzi lezinhlelo eziningi
Ithuluzi lezinhlelo eziningi, eliyaziwa nangokuthi i-multitool, iyithuluzi elisebenzelana nezimo ezivame ukusetshenziselwa abenzi bezingcweti nabangcweti. Lawa mathuluzi aqhubezela, ngaleyo ndlela asusa ama-multitol, futhi afaniswa neDremel. Bahlanganisa amakhono ahlukene emkhakheni wezobuciko abe yithuluzi, njengokugaya, ukuxubha, ukusika, ukupholisa, ukugaya nokugaya. Ngenxa yalezi zinhlobo eziningi, ithuluzi elisebenza ngokugcwele liyi-multitalent yangempela kanye nomsizi omncane futhi onomsebenzi wokusetshenziswa kwansuku zonke emsebenzini noma ekhaya. I-multitools isetshenziselwa lapho kudingekile ukuthi isebenze kahle futhi ukuthi amathuluzi ajwayelekile kagesi, njenge-grinder oscillating noma i-jigsaw, ayinalo nhlobo. Uma kwenzeka imisebenzi efana nokunqunywa okusheshayo kwezinhloko zezipikili, ukukhishwa kweglue, ukugaya izingxenyana ezihambelanayo, ukuvulwa kwamathangi amathayili nokususwa kwamatayela, la mathuluzi angasetshenziswa kahle. Ukubheka izinto zokusetshenziswa ezifana nezensimbi, ipulasitiki noma izinkuni kubonakala kalula ngokusiza amashidi akhethekile e-Multitool. Ngokungafani namadivaysi avamile, amathuluzi amaningi asebenzayo aklanywa ngokuhlukile, ngoba i-multitool ayiguquki kodwa i-oscillates. Kulesi simo, isivinini esingenzi lutho okungenani kuze kube yi-20.000 oscillations ngomzuzu nangokwesilinganiso se-oscillation kuze kube yizicathulo ezintathu. Ngemisebenzi ehlukene yamathuluzi amaningi, kusetshenziswe okunamathiselwe okuhambisanayo, okunikezwa yi-Bosch nabanye abahlinzeki njengezesekeli.
Izinhlobo zamathuluzi amaningi
Ama-multitorial ngokuyinhloko ahlukanisa phakathi kwamathuluzi enethiwekhi ne-battery. Ukuhlukana kanye nezinzuzo nezinsalela zezinhlobo zamathuluzi amabili we-multifunction kuchazwa ngezansi.
Amathuluzi amaningi axhumene nekhebula asebenza yikhebula lamandla. Lokhu kubangela ukusebenza okuphezulu kakhulu. Ngenxa yalokho, imisebenzi emikhulu, efana nokusika izinkuni nezinye izinto, zingenziwa ngokuzikhandla. Lezi zizwe eziningi ziyakhuthaza nokusebenza ngokuphakade, ngoba lapha okwamanje akupheli nganoma yisiphi isikhathi. Ngamanye amadivaysi kukhona ikhebula lamandla, elihlale linxhunyiwe noma mhlawumbe lingafakwa. Kubalulekile futhi ukuthi ikhebula lingenalutho futhi livikelekile uma isebenza nohlobo oluthile lwamathuluzi amaningi.
Amathuluzi amaningi angasebenzisa i-Cordless
Ama-multitoloni anikwe amandla ebhetri athola amandla ngokusebenzisa ibhethri edidiyelwe, njengoba igama lisho kakade. Esimweni evamile umuntu usebenzisa ibhetri ye-lithium-ion ye-18 Volt, enekhono eliphansi lamahora ama-ampere. Lawa mathuluzi amaningi asebenzayo aqhubeka ethandwa kakhulu ngoba anikeza izinzuzo ezilula ngaphezu kwama-multiitool asebenzisa ikhebula. Angasetshenziswa ngokushesha ngaphandle kokuxhuma ikhebula lamandla. Kubuye kube lula ukusebenza, ngoba akukho zicingo okufanele zihlonishwe. Kungenzeka ukuthutha ithuluzi le-multifunction yebhethri ngaphandle kwezinkinga, isibonelo, kusuka ekamelweni elilodwa kuya kwelinye, yingakho lezi zizwe eziningi ziguquguquka kakhulu. Ngenxa yokusebenza kwebhethri elinganiselwe lala mathuluzi, amathuba anqunyelwe. Imisebenzi encane, njenge-cockroaching, i-polishing kanye gaya ama-multitools ajwayele kakhulu afanelekile. Uma kunemisebenzi emikhulu edinga amandla amaningi, njengokusika noma ukusika insimbi, kunezinkinga ngoba ububanzi bebhethri bufinyelelwa ngokushesha kule ndlela. I-multitool eboshwe ngekhebula ingcono kakhulu kulokhu. a Hammer rotary ayishintshi ithuluzi le-multifunction.
I-criteria yokuthenga yama-multitools
Isigaba esilandelayo sichaza amaphuzu okufanele acatshangelwe uma uthenga ithuluzi lezinhlelo eziningi.
Ngethuluzi lezinhlelo eziningi, ukusebenza kubaluleke kakhulu. Kukhona amadivayisi avela kubakhiqizi bemikhiqizo, enikeza ukusebenza okuphezulu kusuka ku-300 kuya ku-350 Watt. Abanye abahlinzeki nezihumusho banamanzi aphansi phakathi kuka-190 no-250 Watt, okulungele kangcono imisebenzi yasekhaya emincane. Okungafanele ukukhohlwa ekusebenzeni kwe-Watt ukushisa kwamathuluzi. Lokhu kuyashesha kakhulu nge-wattage encane futhi ngaleyo ndlela ayijabulisi ukusebenza. Esinye isici samandla yisisindo esingenalutho, esibonisa ukujikelezwa ngomzuzu kusuka enjini. Okusho ukuthi, isivinini esingenalutho se-multitool, sikhulu amandla. Lapha, kubalulekile ukuqala kusukela kusiqondiso kusukela ku-10.000 kuya ku-19.500 izinguquko ngomzuzu. Njengoba sekushiwo kakade, umthombo wamanje ubalulekile ekusebenzeni kwalolu thuluzi. Uma lezi zinhlayiyana zinikezwa, kungenzeka futhi ukusebenzisa i-multitool ezimele ukususwa kwamalungu emathini.
Ngokuyisisekelo, ithuluzi lezinsiza eziningi lihlomele izesekeli ezifanele, ezihlanganisa ububanzi bokusetshenziswa okungenzeka. Naphezu kwakho konke lokhu, kuyadingeka ukuba unake imishini ukuze izicelo ezifunwayo zingenziwa. Uma kunesidingo, izesekeli zeMultitools zingazithengwa ngaso sonke isikhathi, kodwa kufanele zifaneleke eklasini lentengo. Amathuluzi amaningi ahlinzeka ngemisebenzi ehlukene, njengedivaysi yokuvuthwa noma uhlelo lokukhululwa okusheshayo. Uhlelo lokukhishwa ngokushesha lufaka esikhundleni sokunamathiselwe ngaphandle kwesihluthulelo so-Allen noma isikrini. Lokhu kubangela ukuphatha kahle, isikhathi sokulondoloza kanye neminye imizwa. Ngezenzo ezifana nokukhishwa kwamathayili, idivaysi yokuncoma ibaluleke kakhulu, ngoba lokhu kubangela ukungcola nokuthuli okuningi. Ngalesi divayisi, i-vacuum cleaner ingaxhunyaniswa nama-multitool. Ngakho-ke lokhu kuyisisombululo sokungcola nokuthutha okuvela. Idivaysi yesikhumba iphinde ilulekwe ngenxa yezizathu zempilo, ngakho-ke uthuli oluwelayo kanye nabanye alufakiwe. I-multitool igcinwa esimweni esinikeziwe. Abathengisi abaningi bathumela amathuluzi abo asebenzayo amaningi ehambisana nezikhwama, eziqukethe nezesekeli. I-suitcase iyadingeka kulelo thuluzi lonke.
Uma usebenza ngethuluzi lezinhlelo eziningi, kufanele kube ukhululekile futhi unomphela ngaphandle kwenkinga. Ukuze uthole umsebenzi olula ngalawa mathuluzi, kubalulekile ukuqinisekisa ukuphathwa okulula nokulula. Lokhu kuqala ngesibambo esenziwe ngendlela ye-ergonomically futhi ifaniswe kahle ngamandla. Endabeni yama-multitol, izinkinobho ezisebenzayo kufanele zikwazi ukuqhutshwa ngokushesha futhi kalula. Kubalulekile ukunaka uhlobo lokushintsha ithuluzi. Uma ushintsha okunamathiselwe ngaphandle kwethuluzi ngokusebenzisa uhlelo lokugqekeza, ulondoloza isikhathi esiningi. Ngaphezu kwalokho, kuqinisekisa ukuphathwa ngendlela ekhululekile. Kodwa-ke, uma udinga amathuluzi afana nesikebhe se-Allen noma isikulufaji sokushintsha okunamathiselwe, kuthatha isikhathi eside. Ngokuqondene nesisindo, kubalulekile ukunaka isisindo somsebenzisi-friendly ngoba ukusebenza okuphakade kungabangela ukucindezeleka ngesisindo esiningi.
Endabeni yezizwe eziningi, isisindo siyadingeka ngoba amathuluzi abanjwe unomphela esandleni futhi ngakho-ke umthwalo kufanele ube ngaphansi ngangokunokwenzeka. Ngomsebenzi omuhle, kubalulekile ukuthi akunzima neze. Amathuluzi amaningi asebenza ngokulinganisa phakathi kwe-1,2 ne-1,5 kilogram.
Yeka ukuthi ithuluzi eliningi kangakanani lokubiza, kodwa, alikwazi ukuphendulwa ngokuyisisekelo. Kunalokho, kubalulekile ukuqaphela ukuthi yimiphi imisebenzi esetshenziselwa yona. Uma uhlela ukusebenzisa i-multitool entsha kwezinye izimo, akudingeki ukuthi uthenge ukuhluka okubizayo, kodwa okuhle ngaphakathi ekilasini lentengo ephakathi kwanele. Lezi zifanelekile kumqhubi we-amateur kuze kube se-angler. Kodwa-ke, uma kufanele isetshenziswe izikhathi eziningana ngosuku futhi ingafeza cishe yonke imisebenzi eyenzekayo, kubalulekile ukuthenga ithuluzi lezinsiza eziningi nezesekeli zekhwalithi ephezulu. I-multitool kuhla lwamanani entengo kunconywa kubadwebi noma abathandekayo abathandayo baka-DIY. Lokhu kuqinisekisa izinga elihle kakhulu, likhwalithi eliphezulu futhi linezinhlobo eziningi zemisebenzi kanye nezesekeli. Kungenzeka futhi ukusebenzisa leli thuluzi njalo eminyakeni eminingana.
Kukhona abathengisi abaningana okuvela kuwo amathuluzi amaningi asebenzayo:
Abakhiqizi abathathu abahola abahlinzeka ngeMultitools bavezwe ngezansi.
UMakita Werkzeug GmbH, osekelwe ku-Ratingen, unikeza ama-multitoloni phakathi kwamathuluzi amaningi amandla. Ngalesi nkampani, ibanga lomkhiqizo licacile futhi lincane kakhulu. Imishini yenethiwekhi ephezulu yokusebenza kanye namabhethri avuselelekayo akhiqizwa ngezinsiza eziningi. Amathuluzi amaningi asebenzayo avela eMakita afaneleka ama-DIY nabasebenza ngobuciko. Ikakhulukazi ne ungenantambo amathuluzi multi ezifana izinga Makita DTM51Y1JX8 ka Makita amayunithi ayatholakala, engesiyo kuphela ehlangene ephezulu ukusebenza amabhethri nezilandiso. Ngokuyinhloko, amathuluzi kaMakita ahlangabezana nezidingo eziphezulu kakhulu ekusebenziseni umsebenzisi nobungcweti. Ngaphezu kwalokho, lokhu inkampani inikeza uhlelo ipotimende kusebenziseka kalula ngokuthi MAKPAC, ngokuletha multitool kuhlanganise izesekeli kalula futhi ngokuphepha zingagcinwa kanye zithutha. Ukulethwa okujwayelekile kufaka phakathi izinsiza eziningi ezahlukene, okuhlanganisa zonke izidingo ukuze umsebenzi uqale ngokushesha. Ngesikhathi sokuthenga ithuluzi leMakita eliyinkimbinkimbi uzothola isethi yezinsiza ze-41.
Ithuluzi le-Macita ye-multifunction (ngaphandle kwebhethri / ishaja, i-390 W, 18 V) Isibonisi se-DTM51Z
Inombolo ye-oscillation eguquguqukayo ngekhompiyutha
Ukuguqulwa kwamathuluzi okufaka amathuluzi
Ithuluzi le-Multifunction lokubona, ukusika nokugaya
Izesekeli ezengeziwe zezinhlelo eziningi zokusebenza ezikhethwa ngokuzithandela
Ngokuqala kokuqala nokuvikela kabusha
Njengenkampani yomkhiqizo ophumelelayo, inkampani yeGerling Bosch ikhiqiza ama-multitools. Empeleni, amathuluzi amaningi okusebenza kusukela ku-Bosch ahlelwe kahle futhi aphezulu. Ngaphezu kwalokho, inkampani inikeza uhla olubanzi lomkhiqizo kanye nenkonzo yamakhasimende enhle kakhulu. Ekukhetheni okukhulu kwe-multitools ezahlukene, umehluko wenziwa phakathi kohlaza okwesibhakabhaka nomugqa womkhiqizo oluhlaza. Imishini yeBluetooth iyatholakala kubadwebi, kuyilapho izitshalo eziluhlaza zihloselwe abathandekayo baka-DIY. Ngisho ne-Bosch inamathuluzi ama-multifunctional ekhebula nebhethri enikwe amandla okunikezwayo. Ithuluzi le-GOP 300 SCE multi-function, elivela emgqeni womkhiqizo ohlaza okwesibhakabhaka, okwamanje idivayisi engcono kakhulu yenkampani. Izinqubo zemithwalo, njenge-L-BOXX, zikhululekile ikakhulukazi futhi zihambelana namakhasimende. Ngenxa yesistimu yebhokisi, kungenzeka ukuhlunga futhi udlulisele i-multitool kanye nezesekeli. Kuzo zonke izinhlelo zokusebenza eziningi, i-Bosch inikeza ububanzi obuphezulu nobubanzi bezesekeli kula mathuluzi.
Ithuluzi le-Bosch Multifunction PMF 250 CES Set (250 Watt, uma kwenzeka) libonisa
Ithuluzi le-multifunctional Setha i-PMF 250 CES Setha - usizo olunamandla jikelele jikelele lwezinhlelo zokusebenza eziningi
Ukufanelekela imisebenzi eminingi ngenxa yezingxenye eziningi: ukugaya, ukukhipha, ukubeka, ukusika, ukusika, ukugaya, ukugcoba
Nge-preselection ngesivinini somsebenzi ohambisana nomzimba kanye ne-Bosch Constant electronics, ukuze amandla agcine ekhona ngisho nangaphansi komthwalo osindayo
I-precision ne-softness idlula emaphethelweni okusika we-"Curved-Tec" we-driving saw blades
Londoloza ukujula okuqondile kokunciphisa nge-4-level depth stop kanye nokugaya okuphansi okudumayo ngenxa ye-adapter yokuhlanza
Ngamathuluzi amaningi, inkampani Fein iholele eSchwäbisch Gmünd-Bargau. Ngenxa yokwazi kwayo okukhulu, okwamanje inikeza ama-multitools amahle kakhulu. La mathuluzi akhuthaza ngenhla yonke ikhwalithi yabo ephakeme kakhulu yezinto ezisetshenzisiwe, umsebenzi ophezulu wekhwalithi kanye nokusebenza okunamandla njengoba bequkethe ama-motor akhiwe ngendlela ephakeme. Yingakho abadwebi bekhetha lokhu. Ithuluzi elihle kunazo zonke le-multifunction kusuka ku-Fein yi-Multimaster FMM 350 Q Top, eyaziwa emakethe. I-Multimaster iyinhlangano yokusebenza okuphakade. Ngakho-ke kufanelekile kubakhandi nabathandekayo be-DIY abanomdlandla, lapho ukusebenza okuphezulu kudingeka khona ngokusetshenziswa okuvamile. Ngaphezu kwalokho, i-Multitools inikeza izesekeli eziningi ezihlukahlukene, ezifakiwe ezinhlotsheni ezahlukene. Ngenxa yamasethi ahlukene, zonke izinhlelo zokusebenza kungenzeka. Ngaphandle kwamathuluzi amaningi asebenzayo, i-Fein ineziklomelo ezingaphezulu ezibiza izindleko zabaqalayo, njenge-FMT 250 W Start.
I-Multi Multifunction Tool (i-350 Watt Fine High Performance Motor, i-QuickIN Quick Release System) I-FMM 350 QSL Ukubonisa
I-350 Watt enamandla kakhulu yokusebenza
Ukudlidliza okungaguquguquki kalula, bheka u-E-Cut Precision BIM wabona umhlanga
I-StarlockPlus umnikazi wethuluzi, uhlelo lwe-QuickIN lokukhishwa ngokushesha
Iminyaka engu-3 yokukhiqiza
Delivery: sanding ipuleti, kuye 3 Sanding amashidi (K 60 / 80 / 120 / 180) perforated, sanding ipuleti, perforated Kuye 3 Sanding amashidi (K 60 / 80 / 120 / 180) ukugaya 115 ipuleti Ø mm, wangishaya, perforated, kuye 2 Sanding amashidi (K 60 / 80 / 180), ukuncela, ikhule spatula, e-Sika Long-Life wabona 35 mm, Universal e-Sika wabona blade 44 mm, 1 e-Sika Long-Life diving blade 65 mm, HSS ingxenye wabona blade, Carbide ingxenye wabona blade, Carbide rasp (umumo esingunxantathu), perforated, ithuluzi plastic
Kukhona izingozi njalo, ikakhulukazi emisebenzini yobuciko. Ngokunamathela ezinyathelo zokuphepha ezilula, kungenzeka ukunciphisa ingozi yokusebenzisa amathuluzi amaningi. Okulandelayo, lezi zinyathelo zichazwe.
Lapho usebenza ne-Multitools, kubalulekile ukugqoka amagilavu ​​okuzivikela. Amagundane nawo akuvikela ekushiseni nasekucwilweni ngezinhlanzi ezindizayo, izindiza noma izimpande. Kuyadingeka ukuthi amagilavu ​​evikelayo afanelekile futhi afane. Kungcono ukugqoka amagilavu ​​aqinile, ane-rubberized surface.
Uma usebenza ngethuluzi lezinsiza eziningi kanye nokucubungula izinto ezihlukahlukene zokusetshenziswa, ezifana nezinkuni noma zensimbi, ama-chips, ama-chips nezinhlanzi zingahamba nxazonke. Amehlo angalimala ngokushesha. Ngakho-ke lokhu kuvikelwe kangcono ngezinkukhu ezivikelayo. Lesi skrini kufanele sihlelwe ngabanye, ngakho-ke akusobala okukhululekile noma esiqinile kakhulu. Izigqoko ezivamile zenziwa nge-polycarbonate.
Ukuvikelwa kokuphefumula kuyadingeka lapho usebenza nezinto zokwakha, udala uthuli namafutha anobuthi. Uma usebenza ngethuluzi le-multi-function, ukuvikelwa kufanele kugqoke ukuhamba kwemimoya. Kumele kuqashelwe, ukuthi akayena oqinile, noma okhululekile kakhulu uhlala futhi uguqule kahle.
Kuye ngokusebenza kungenzeka ukuthi ithuluzi le-multi-function liba nomsindo kakhulu. Uma isebenza ngokuqhubekayo, umphumela oqhubekayo wezinga eliphezulu lokucindezela umsindo kwi-eardrum lonakalisa. Lokhu kungaholela ekulimaleni okungenakuqhathaniswa nokuhlala njalo. Lokhu kufanele kuhambisane nokuhlinzeka ukuvikelwa kokuzwa kwezinga eliphezulu kakhulu. Kunconywa ukuvikelwa kwezindlebe lapha, okungasetshenziswa ngokuhlelwa ku-ibhakha lokubamba. Kubalulekile ukuthi ukuvikelwa kokuzwa akukona okukhululekile futhi akunamandla kakhulu.
Ukuze uqinisekise ukuthi ikhanda alilimazi yizinhlanzi, izibhamu, izinkuni noma izinsimbi zensimbi phakathi nemisebenzi ene-multi-function ithuluzi, kuyadingeka ukuyihlomisa ngesigqoko. Isigqoko sokuzivikela kufanele silingane kahle, ungacindezeli futhi ungabi nhlobo kakhulu. Kubalulekile ukuthi amabakaki amagogi abekwe ngaphansi.
Imiyalo eqhubekayo yokuphepha
Ukuze uthole umsebenzi, kunconywa ukugqoka izingubo zokusebenza noma izingubo ezindala. Ithuluzi le-multifunctional kufanele lihlolwe ukusebenza ngaphambi kokusebenza komsebenzi. Uma kwenzeka kudivayisi exhunyiwe kunethiwekhi, kubalulekile ukuthi ungalimazi ikhebula. Kumele kungakhathaliseki ukuthi kuyisikhubekiso endleleni. Kuyinto ebonakalayo ukuthi isimo esisodwa esibucayi nesempilo sisetshenziswa.
Ithuluzi le-Bosch Multifunction PMF 350 CES (350 Watt, ye-Starlock ne-Starlock Plus accessories, uma kwenzeka) Veza
I-all-rounder enamandla yokwenza ngcono kwasekhaya Kungakhathaleki, ukusonga, ukusonga, ukusika, ukugaya noma ukugaya, ngenxa yobubanzi obukhulu bezesekeli izinhlelo eziningi zinokwenzeka
Ukulondoloza ukujula kokunciphisa nge-4 ukumisa ukujula nokubambelela kokudambisa ukuze uthole isiqondiso esihle
Ukukhanya okukhanyayo kwendawo yokusebenza kubonga ngebhendi ye-180 degree light kanye nokugaya okuphansi othulini nge-adaptha yokuhlanza i-vacuum
Ngesikhombimsebenzisi se-Starlock sokudluliswa kwamandla okuhle futhi ithuluzi elilula lishintsha nge-AutoClic system
Ububanzi ukunikezela: Pmf 350 CES, ingxenye wabona blade ACZ 85 Eb, blade diving AIZ 32 EPC, blade diving PAII 65 APB, delta sanding ipuleti AVZ 93 G, 6 PC. Schleifpapierset, anti-vibration isibambo, 4-esiteji ukujula stop, uthuli isizinda, icala (3165140828567)
Ithuluzi le-Einhell Multifunctional TE-MG 300 EQ (300 W, ijubane kanye ne-elekthronikhi ejwayelekile, i-incl. Saw blade Ukukhetha, i-sandpaper, okokuhlola, inkomba yamacala okuhamba
Injini enamandla ye-300 Watt yezidingo zokusebenza eziphakeme kakhulu.
Ukukhipha okusheshayo nokukhiya kwamathuluzi kazibuthe wokushintsha okulula nokungenathuluzi. Izikhathi zokuphatha amathuluzi eziyishumi nambili. Umsebenzi ophephile futhi onethezekile ngokubamba okuthambile.
Ijubane le-elekthronikhi lomsebenzi owenzelwe ukusebenza. Ngenxa yama-elekthronikhi njalo akukho ukulahleka kwesivinini emithwalweni ephezulu.
Kufaka phakathi idivaysi ekhishwa ngamathuluzi engenalo uthuli ne-adaptha yelihhala yokufaka uthuli.
Kubandakanya i-HCS ne-BIM dip eye blade, ingxenye ye-2x ibona amabala, isikena, ipuleti yesanti enxantathu, amaphepha e-6 e-sanding emacaleni wokuhamba nokugcina
Ithuluzi lemisebenzi eminingi, i-GOXAWEE ithuluzi lokujika elinezesekeli eziyi-140, i-Multipro chuck engenakukhiye kanye nomgodi oguqukayo wabathengisi nabathandi be-DIY
★ Izesekeli nokunamathiselwa okungu-140: Leli thuluzi elenza imisebenzi eminingi liqukethe i-shaft eguquguqukayo - kufana nepeni kumaphrojekthi akho aqondile; Isivikelo esivikelekile sivikela emhlolweni lapho usika futhi ugaya; Indawo yokufukula isiza ngokunemba ngomsebenzi wokhuni. Ama-discs e-daimane okusika angamathiphu amahle kakhulu weglasi, ama-ceramics, amathayili waphansi njll. Izesekeli ezingama-140 zamaphrojekthi akho e-DIY ahlukile.
★ I-Multipro keyless chuck: Ngenxa yalokhu okunamathiselwe, ungashintsha izesekeli kuthuluzi lokujika ngokushesha futhi kalula. Ithuluzi lokujika le-GoXAWEE lamukela izesekeli kusuka ku-0,5-3,2mm shank, lihambelana kakhulu kunabanye.
★ I-grinder yezinhloso eziningi ze-Multi-injongo: Iphelele ukusika, ukuhlukanisa, ukumba, ukufaka umbhalo, ukugaya, ukugaya, ukuhlanza, ukuhlanza, ukukhipha, ukucija, ukubopha, njll! Zonke lezi zicelo ezihlukene kungenzeka zigxile kuthuluzi elilodwa!
★ Ijubane elilungisekayo: Amazinga ama-5 wejubane eliguquguqukayo (8000-30000 RPM) alungele ukusebenza okulawulwa ngokufanele. Ijubane elithambile elilungele ukuhlanza nge-shayela ye-wire, isivinini esikhulu esifanele ukugaya, ukusika, ukukhahlela.
★ Umqondo wesipho wabathandi be-DIY: Iphakheji enesikhwama esiphelele sokuthwala, isisindo esilula sokuthwala kalula! Ithuluzi le-GOXAWEE lokusebenza okuningi lisiza elihle labasebenza izingcweti kanye nomqondo omuhle wesipho wabathandi be-DIY!
Ithuluzi le-Bosch Multifunction PMF 220 CE (220 Watt, ye-Starlock Sets, uma kwenzeka) Display
Ithuluzi le-multifunctional PMF 220 CE - umsizi wakho oguquguqukayo
Ngomsebenzi osebenza ngokuzenzekelayo ngokubonga izesekeli ezijulile: ukugaya, ukusika, ukubeka, ukusika, ukusika, ukugaya, ukuphosa
Ukulondoloza ukujula okujulile kokubonga ngenxa ye-4 ejike ekujuleni kokujula
Ngesikhombimsebenzisi se-Starlock sokudlulisa amandla okusebenza kahle nokushintsha ithuluzi lula nge-screw universal
Ububanzi ukunikezela: Pmf 220 CE, ingxenye wabona blade ACZ 85 Eb, blade diving AIZ 32 EPC, delta sanding ipuleti AVZ 93 G, 6 PC. Isethi ye-sanding isethelwe, i-4 iqhube ukuma kokujula, ukhiye we-Allen, icala (3165140828482)
Ithuluzi elenziwa ngemisebenzi eminingi, ithuluzi lokujika le-TECCPO 200W elinengalo ye-telescopic kanye ne-table clamp, elinezisetshenziswa eziyi-120, ukuqhutshwa kweminithi ngejubane le-5 + max elihlukile, elilungele izipho zoSuku lukaYise -TART13P ukubonisa
I-AtFather's Day Offer🎁 ▶ 【enamandla e-200W esebenza ngemoto eminingi】 - Ifakwe ngemoto enamandla anamandla angama-200 W okumsulwa, isivinini esingu-5 + max ukusuka ku-10.000 kuye ku-40.000 rpm singashintshwa. Ungakhetha isivinini esifanele sokusika, ukusika, ukusika, ukuqopha, ukusika, ukwenza polishing nokusika ukuze uvumelane nezidingo zakho. Ukusebenza okuningi kufeza izidingo zakho zokudalwa kwe-DIY.
▶ 【Uhla olubanzi lwezinhlelo zokusebenza】 - Iyahambisana nezinesekeli ze-Dremel. Izesekeli eziyi-120 zinikelwa ngebhokisi elincane leplastiki, kanye nezinto ezi-5 zokusebenza okuphezulu: i-telescopic arm & clamp clamp, shaft eguquguqukayo, isivikelo sokuzivikela, i-chuck yomhlathi amathathu, umhlahlandlela obukhali, uhlangabezana nezidingo zakho ezihlukile futhi unikele ngezinketho eziningi zomsebenzi.
▶ 【Ukuvikelwa okweqile】 - Isingenisi somoya esinokuvulwa okukhulu kokuqothuka kokushisa okusebenzayo. Isivikelo esakhelwe ngaphakathi sokuvikela ukulimala kwenjini, sandisa impilo yenjini futhi siqinisekise ukuphepha komuntu siqu. Akunakwenzeka ukucindezela shaft yokukhiya ngemuva kokuqala ukuvimbela ukuthinta ngengozi nokuqinisekisa ukuphepha.
▶ 【Kulula ukuyisebenzisa futhi ithokomele】 - Ngamathuluzi enjoloba e-TPE athambile, iTECCPO Multi Tool inikezela isibambo esintofontofo futhi esisebenzayo futhi inomthelela ekusetshenzisweni okuzinzile nokuphephile. Ungaziphatha kalula lezi ngomsebenzi onembe noma umsebenzi osindayo.
Promise 【Iminyaka emi-2 yethembiso yekhwalithi】 -1 x TECCPO 200W TART13P ithuluzi lezinto eziningi ezisebenzayo, izesekeli eziyi-x x, ingalo ye-telescopic ne-clamp, 120 x ezintathu-imihlathi, 1 x ukuvikelwa okusobala, isiqondisi esingu-1 x isiqondisi, 1 x ukusika umhlahlandlela, 1 x isibambo esengeziwe Ibhokisi lamathuluzi eli-1 xRobuster, 1x ibhukwana lokufundisa.
I-TROTEC 4420000101 PMTS I-10-230V Ithuluzi lemicimbi eminingi esebenza ngohlelo lokukhishwa okusheshayo, imoto ye-300W, izesekeli ezibanzi ezisetshenzisiwe, ukuboniswa kwecala lokuhamba
Ngale phakethe lamandla ungaqala iphrojekthi yakho ngqo - plug in bese uhambe. Ukuqala okujwayelekile kwe-PMTS 10-230V kuqinisekisa ukuqala kahle kwezimoto zayo ezinamandla ezingama-300 W, ezingagcini ngisho nemisebenzi efuna kakhulu ngaphandle kwesinyathelo. Uma sekuvuliwe, i-oscillates unomphela futhi ngokuthembekile kuze kube izikhathi ezingama-21.000 ngomzuzu - iyaguqulwa njalo nganoma isiphi isikhathi ukuze ilungiswe kahle kokuqukethwe kanye nesicelo esifanele.
Ngenxa yokusebenza kwe-plug esebenzayo, i-PMTS 10-230V ilungele kakhulu umsebenzi wokuphinda uchithe isikhathi, ngoba akudingeki unake umthamo webhethri uma usebenzisa leli thuluzi elenza imisebenzi eminingi. Ngaphezu kwalokho, sibonga amandla e-AC, izinhlobonhlobo zezinto ezifana nezinkuni, insimbi, ipulasitiki noma i-ceramic konke kungaqhutshwa ngaphandle kwenqubo ngenqubekela phambili yomsebenzi osheshayo. I-angle enkulu ye-oscillation yamadigri ayi-3,2 iqinisekisa ukusebenza okuqondile.
Ukuze ukwazi ukusebenza ne-PMTS 10-230V ngendlela egxile futhi engakhathali, kwagcizelelwa ngokukhethekile ukwakheka kwe-ergonomic lapho kuklanywa leli thuluzi elenza imisebenzi eminingi, yingakho idivaysi, eyakhelwe ukuthi ingafinyeleleka kalula, ilele kahle esandleni. Ukufakwa okuphakathi kwe-softgrip kunikeza ukubamba okuphelele futhi ukuhlelwa kokushintshwa okucatshangwe kahle kunika amandla ukusebenza okuguquguqukayo kwesandla esisodwa ngokulungiswa okuqhubekayo kwenombolo yokudlidliza.
Uma ukunamathiselwa kufanele kuguqulwe, lokhu kungenziwa ngokushesha futhi kalula nge-PMTS 10-230V kusetshenziswa uhlelo olusanda kukhishwa. Mane nje udonse i-clamping lever, uguqule okunamathiselwe ngaphandle kwamathuluzi futhi ukwenze ngendlela ehlukile kolunye lwezikhombisi-ndlela zokusebenza eziyi-12.
Ububanzi bokulethwa: I-1 x ithuluzi elenza imisebenzi eminingi i-PMTS 10‑230V, i-1 x isihloli se-HCS SC 80/30 (yokususa ukunamathela kwethayili, abicah, udaka nosawoti wokupenda), ingxenye engu-1 x yabona i-HSS SM 85/20 (yokhuni nensimbi), 1 x plunge-cut saw blade BIM blade I-CS 75/25 ye (izinkuni, ipulasitiki, i-GRP, insimbi ekhanyayo futhi engaholi), i-1 x plunge yabona i-HCS CS 95/40 (ngokhuni, ipulangwe, kanye neplastikhi ethambile), 1 x ipuleti le-sanding sanding, 12 x Velcro sanding triangles for mbao, Ama-6 x Velcro amasanti onxantathu ensimbi, 1 x icala lokufaka
Ithuluzi elenziwa ngemisebenzi eminingi, ithuluzi lokujika le-Tacklife, isivinini esiguqukayo ngezisekeli ezingama-80 nezinamathiselo ezi-4, ishafti eliguquguqukayo yesibonisi se-DIY se-RTD35AC
Okunamathiselwe okukhethekile kwe-🔨4 - shaft eguqukayo, imiyalo yokusika, ukubamba okuthambile, imiyalelo yokusika. Lezi zinto ezi-4 zenza iphrojekthi yakho eqondile ibe elula futhi isebenze kahle
Izesekeli zekhwalithi ze-ighHighigh- izesekeli ezingama-80 zamaphrojekthi akho e-DIY ahlukile. Izesekeli ezinwetshiwe zifakwa ebhokisini lepulasitiki elincane elicacile ukuze izinto zimi kahle. Ngaphezu kwalokho, konke okunamathiselwe kunganamathiselwa kalula futhi kufakwe okunye
Amazinga we-🔨6 we-control isivinini esishintshashintshayo - Ijubane lemoto lingashintshwa ngokuqhubekayo kusuka ku-10 liye ku-000 izinguquko futhi lihlala lingaguquki ngisho nangemva kwekhefu emsebenzini ngenxa yokuhlukanisa okushintshiwe / kokushintshiwe
🔨Multi-Ithuluzi-Noma ngabe ukusoka, ukusika, ukugaya, ukusongela, ukugaya, ukusika, ukunqothula noma ukugoqa ... zonke lezi zimo zohlelo lokusebenza zingenziwa ngethuluzi elilodwa nje lomsebenzi
Idea Umqondo omkhulu wesipho sabathandi be-DIY - konke kuyimeko enhle kakhulu! Ithuluzi elizungezayo, icala lamathuluzi, izesekeli (isibambo esisizayo, ukusika, i-hood yokuzivikela, umgodi oguqukayo), ibhukwana
I-AUTSCA yamathuluzi amaningi asebenza ngokujikisa amathuluzi okuhlanganisa amathuluzi Nge-168-chidimbu ezifakiwe ezifakiwe nezinamathiselo ezi-4 ezinesekeli eziningi zezinto ezithandwayo ezizungelezisayo zabasizi be-Handyman kanye nabathanda i-DIY
[Izesekeli ezahlukahlukene] Izesekeli ezingama-168 nezinye izinto ezi-4, ongashintsha ngazo kalula futhi kalula izesekeli ezahlukahlukene ezinjengama-polishing disc, amadayimane okushayela, amatshe alukhuni, amasika okusika, umsiki wokugaya kanye ne-sandpaper njll.
[Ithuluzi le-All-round] Ithuluzi elenza imisebenzi eminingi ye-AUTSCA liyithuluzi elihamba wonke kuyo yonke imboni, yokuhlobisa ingaphakathi, amagceke nezingadi kanye nokulungiswa kwansuku zonke lapho kuhlotshiswa indlu noma ezindongeni zakho ezine. Kumele kube ngabazithandayo.
[POWERFUL] Ijubane eliguqukayo elingafani ne-8000-min - 32000 rpm ngomzuzu womsebenzi ohlobene nezinto ezibonakalayo.
[Unethezekile] Ngenxa yokwakheka kwe-ergonomic nezinto ezikhethekile ezingashisi, ithuluzi lokusebenzisa ugesi lingabanjwa ngokuphephile futhi kahle ngesandla.
[Service Best] - Iwaranti yonyaka owodwa. Uma umkhiqizo unezinkinga zekhwalithi noma izinkinga zokusebenzisa, sicela uxhumane nathi, sizoyixazulula inkinga asipe futhi sinikeze insiza enhle kakhulu kumakhasimende.
Ithuluzi elisebenza ngemisebenzi eminingi, ithuluzi lokujika le-Meterk 170W elinezisetshenziswa ezingama-83 (ama-2 colleges -2.3 / 3.2 mm), izilungiselelo ezijubane ezi-6, umshini wokugaya izinhloso eziningi wokugaya, ukusika, ukugaya nokuqopha
I-【6 izilungiselelo zesivinini esishintshashintshayo】: Ithuluzi le-Meterk multifunction lifakwe moto onamandla we-170W, ukuze ukwazi ukushintsha isivinini esiguquguqukayo esingu-6-8.000 rpm ngokwezidingo zakho ukuze uzuze ijubane elikhulu lokusika, ukusika, ukuncipha, ukugaya kanye nokubaza. khetha.
I-♥ 【izesekeli ezibanzi ezingama-83】: Kunezinsiza ezingama-83 ekulethweni, lapho kukhona khona amaqoqo amabili (2,3 mm no-3,2 mm), enzelwe ukuqhutshelwa kuzo zonke izinhlobo zepulasitiki nezinkuni, kanti kukhona nokuhlanzwa okuzwakalayo Polishing nokususa izinto ezisindayo lapho.
I-♥ 【idizayini eyenziwe ngabantu】: Ngokusebenzisa i-nylon impahla, ithuluzi le-Meterk multifunction linikeza isibambo esintofontofo futhi esisebenzayo futhi linomthelela ekusetshenzisweni okuzinzile nokuphephile, ukuze ukwazi ukusingatha kalula umsebenzi onembile noma umsebenzi onzima.
I-【ibhokisi elisebenzayo lokulondolozwa kwethuluzi The: Ibhokisi lokugcina ithuluzi leplastiki liqine, liwubufakazi bese libuyiselana nomswakama, kulula ukulithwala nokulihlanganisa. Zonke izingxenye zihlelekile futhi ziqedile, zihlelwe kahle ukugwema ukusakazeka nokudideka.
I-♥ get Yini oyitholayo: I-1 x Amathuluzi we-Meterk multifunction, 1 x umsizi osizayo, i-1 x shaft eguquguqukayo, i-83 x izesekeli, icala le-1 x lamathuluzi, 1 x ibhukwana lokuqondisa, isiqinisekiso esingu-1 x sama-24. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi nganoma yisiphi isikhathi: ➤➤➤support@meterk.com.
Iseluleko sokuhlola for amathuluzi multi-function
Isihloko esilandelayoGrill wezindlu